Uwe ejiji ejiji maka ụmụ nwanyị dị ime - ogologo na midi, mgbede na ntorobịa, trapeze na akwa ikpuchi, akwabiga ókè na ikpe, uwe T-shirt na hoodie maka okpomọkụ
Uwe eji ejiji maka ndị inyom dị ime - uwe mara mma ma dị mma maka ndị nne na-atụ anya
Ịnọ na-eche maka nwatakịrị bụ oge magburu onwe ya na oké osimiri nke obi ụtọ . E nwekwara oge mgbe nwanyị gha ịgbanwe ihe na ndụ ya. Nke a na-emetụta uwe akwa. Na oge na-ekpo ọkụ, a na-ewere uwe ejiji maka ndị inyom dị ime dịka ezigbo nzọpụta.
Ewuzi maka ndị inyom dị ime - okpomọkụ 2017
Ịgbanye nwatakịrị n'okpuru obi abụghị ihe ngọpụ ịhapụ ihe oyiyi na-ewu ewu, na-ekpughere ya na akpa akpa. Ndị na-emepụta ihe na-akwado nkwado nke ndị nne n'ọdịnihu ka ha nọgide na-enwu gbaa ma na-akpali mmasị na ọnọdụ dị iche iche. N'aka aka nke ndị na-emepụta ejiji na-emepụta uwe dị iche iche nke okpomọkụ maka ụmụ nwanyị dị ime, bụ nke a pụrụ iji obi ike na-eyi n'ọfịs, n'ụlọ na ụbọchị izu, na ịgagharị.
N'ozuzu, uwe ejiji maka ndị inyom dị ime n'oge okpomọkụ nke afọ 2017 na-egosipụta ọtụtụ n'ime ụdị ugbu a nke oge a. Ma isi ihe bụ na ha niile bụ ìhè, na-eru, dị nro, mere n'ụzọ dị otú ahụ na nne n'ọdịnihu dị mma dị ka o kwere mee. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu banyere ejiji eji eme ihe n'ụzọ zuru ezu, ọ dị mkpa ka a rịba ama na uwe ejiji nke afọ 2017 maka ndị ime dị n'okpuru ntụziaka ndị a:
Ngwongwo zuru ụwa ọnụ dị ka ihe kasị dịrị nro na nke kachasị mma maka ejiji kwa ụbọchị.
N'afọ a, mbipụta na-ebute ụzọ kachasị elu na egwurugwu nke ngwọta agba.
Edere akwụkwọ, creases, slats bụ ndị ọzọ na-emekarị afọ a. Ihe ndị a dị mma nke ịkpụ ahụ na-eme ka ị nwee ike ịkwado ejiji n'okpuru nọmba ahụ maka nkasi obi kachasị mma.
Ewuzi maka ndị inyom dị ime maka oge okpomọkụ nke 2017
Ihe eji eji ejiji maka ndi nwanyi di ime
Oge mgbe ndi nwanyi na-agbali igbachi "ihe di nma," ha anaghi echefu ya. Taa, nne na-eme n'ọdịnihu na-egosi obi ụtọ na ọṅụ n'etiti ndị ọzọ, otú a ka ejiji ejiji maka ndị inyom dị ime maka ọtụtụ akụkụ enweghị ntụpọ. N'ụzọ dị iche, a ghaghị ịhọrọ ha n'ụzọ dị otú ahụ iji mee ka ndị dị mma ma jiri nlezianya mesie ịdị ngwa nke pores kasị emetụ n'ahụ ná ndụ nwanyị. Ọ bụrụ na anyị na-ekwurịta banyere ọnọdụ, mgbe ahụ, ọtụtụ n'ime ha, site na oge ezumike, uwe gị nwere ike ma kwesịkwara ịgbakwunye ya na ụdị ndị a:
nwere ụbọ akwara;
elu / hoodie;
Dress-trapezoid maka ụmụ nwanyị dị ime
N'ịbụ nke dị n'etiti narị afọ gara aga, mkpirikpi na-adọrọ mmasị ka na-ewu ewu na ndị inyom ejiji maka ohere iji zoo ezughị okè nke ọnụ ọgụgụ ahụ ma dọpụ uche n'úkwù obi. Uwe a maka ndị inyom dị ime maka oge okpomọkụ ahụ adịghị ejikọta mmeghari nke nne n'ọdịnihu ma nwee ezi ọkọnọ na-enweghị atụ na-eto eto nke tummy. A-silhouette jikọtara ya na uwe nke yiri ibe.
Maka ụdị ọrụ, a ga-ahọrọ uwe ime akwa ndị a na-eji ejiji maka ndị inyom dị ime. Na-atụ anya ka umuntakiri choro ije ije, ya mere, maka njem nlegharị anya na nwube ma ọ bụ ogige, ị nwere ike ịhọrọ ngwaahịa onye kwuo uche ya na mbipụta ya na nchacha nke ọma. Akpata pụrụ iche bụ ihe atụ abụọ, nke uwe ejiji dịka uwe. Nkọwa ikpeazụ na-adọpụ uche site na mkpịsị ahụ ma na-amịpụta silhouette ahụ.
Uwe ejiji na-ekpo ọkụ maka ndị inyom dị ime
Ụdị overexay n'ezie nwere ike idozi uwe ejiji nke nwa agbọghọ ahụ, nke na-atụ anya ka a na-enyeghachi ya na ezinụlọ. Ọzọkwa, ọtụtụ ndị na-emepụta ụdị uwe ndị a gụnyere n'ime nchịkọta ha ejiji ejiji ejiji maka ndị inyom dị ime na-egbughị onwe ha. Sochie knitwear na-atọ anụ ahụ ụtọ ma na-ebute zuru oke, ya mere maka ọnwa atọ nke atọ, ị ka nwere ike ịcha n'ahịrị. Ntubiga okwu ókè na-agụnye laconism, ya mere, iji zere ịkwa emo, họrọ uwe na nkwụsịtụ ntakịrị. Isi ihe dị mkpa nwere ike ịgụnye, dịka ọmụmaatụ, na ịkpụcha ahụike ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ.
Uwe na akwa nkpuchi maka nwanyi di ime
Nke a bụ ụdị nke kachasị mma nke ụdị ụdị niile a na-enye maka oge dị ebube. Uwe n'úkwù agbatị, nke na-adịghị etinye nrụgide na afo, jiri nwayọ jiri nwayọọ kọwaa ọdịdị nke ọnụ ọgụgụ ahụ. Ọkpụkpụ dị mkpụmkpụ na neckline na-emesi obi ike, ma ọ bụrụ na akụkụ a siri ike ka a kpọọ ya dị ka ihe dị mma, ihe nlereanya ahụ na ngwugwu na drapery ga-enyere aka iwelie olu. Ka ọ na-erule ngwụsị oge opupu ihe ubi, ọ dị mfe ịhọrọ uwe mara mma nke oge okpomọkụ maka ndị inyom dị ime:
bicolour, mgbe a na-ebipụ ya na akpụkpọ anụ dị iche iche;
nwere obi abụọ;
Na-agbakwunye belt maka agbakwunyere agbakwunyere na olu.
Uwe mara mma nke nwere akwa ukwu maka ndị inyom dị ime
Uwe Okpomọkụ-Ileba Ụmụ nwanyị Na-enuputa
Ọnọdụ ọrụ na oge a na-eme ka ndị nne na-enwe n'ọdịnihu rụọ ọrụ nke ọma ma na-arụ ọrụ ruo ọnwa ole na ole gara aga. Na ọ bụ ezie na oge a na ndụ nwanyị dị iche iche, a kagbubeghị koodu uwe, ọbụna maka ndị nọ n'ọnọdụ dị mma. Ụdị kachasị mma - uwe ejiji, nke dabara adaba n'ụzọ zuru oke n'ọkwá ọrụ kwa ụbọchị.
Ụcha ndị na-enweghị uche, ezigbo ebipụta, ịcha mma mara mma na ihe ndị dị mma na- eme ka ejiji ejiji maka ndị inyom dị ime bụ nhọrọ zuru oke. N'eziokwu, e nwere ọdịiche dị iche iche site n'ichepụta ihe dị mma:
Maka ndị nne n'ọdịnihu, a na-agbanwe ọkpụkpụ ya dịka karịa karịa.
Maka mma na ohere nke imezi obosara, ọtụtụ uwe ejiji maka ndị inyom dị ime na-adụkọta onwe ha na-esi ísì.
A na-eji ejiji, nsị na ntinye na-agbanwe agbanwe n'ime afọ.
N'oge ọkọchị, anaghị eji agba ọchịchịrị - crimson, acha anụnụ anụnụ, anụnụ anụnụ ma ọ bụ mint dị oke mma n'ọfịs.
Uwe ejiji maka ndi di ime
Na ọ bụ ezie na uwe ejiji na-eme ka akpakọrịta na nnukwu akpa, ndị na-emepụta na-agba mbọ na-eme nza na ụdị a dị ka otu n'ime ọnọdụ kachasị mma nke afọ a. Otú ọ dị, inwe mmetụta mara mma na nke dị mma n'ime ya n'okpuru ụmụ agbọghọ naanị, ma e wezụga afọ, akụkụ ndị ọzọ nke ahụ adịghị agbanwe agbanwe. Iji nwee mmetụta dị mma na ejiji , nye mmasị na otu n'ime nhọrọ ndị a tụrụ aro:
Maka osimiri ị ga-ahọrọ ihe nlereanya site na ákwà na-acha ọkụ ọkụ na-emeghe ogwe na aka uwe-razletaykami.
Uwe dị mma yiri uwe ejiji, na ogologo oge ha.
N'ebe a na-eji ejiji ejiji ogologo oge ejiji maka ndị inyom dị ime. Ọ bụrụ na ị dọka ha n'úkwù, ị ga-enweta silhouette ọhụrụ na-adọrọ mmasị.
Uwe akwa ejiji maka nwanyi di ime
Na-egosi n'oge na-adịbeghị anya, uwe elu akwa ngwa ngwa ghọrọ ihe bụ isi nke uwe-akwa . Ọ na-adaba n'ụzọ zuru oke n'ụzọ nkịtị. N'iji anya, uwe a yiri uwe elu, naanị elongated. Inwe ihe nkenke dị nkenke, n'ihi iji ngwa ngwa gosipụtara, a na-agbanwe ihe nlereanya a. Ogologo nwere ike ịbụ obere, midi ma ọ bụ maxi, dabere na mmasị gị.
Akụkụ elu nke uwe mwụda ahụ dị mkpa, dị ka n'elu, eriri, ma ọ bụ na-agba. Uwe a na-eji ejiji maka ndị inyom dị ime maka oge okpomọkụ, na mpempe akwụkwọ, ihe ndị mara mma, ma ọ bụ monochrome, dị mma kwa ụbọchị. Ejiri na paillettes ma ọ bụ rhinestones, ndị a na-eji ihe oyiyi ememme.
Uwe mgbede maka ụmụ nwanyị dị ime
Ichere maka ọdịdị nke nwa abụghị ihe ngọpụ ịjụ itinye aka n'ihe omume dị egwu. Ịmepụta ihe oyiyi na-adịghị njọ, n'ihi na ọtụtụ ụdị na-eche banyere nke a, na-enye ndị nne na nna n'ọdịnihu ohere nchịkọta nke mbụ maka ntọhapụ:
Ụdị uwe ejiji maka ndị inyom dị ime n'ụdị Alaeze - otu n'ime mgbanwe dị iche iche maka nzube a. Mmiri na-efe efe nke uwe mwụda efu, usoro dị mma nke anụ ahụ mara mma na ọkpụkpụ a gbajiri agbaji na-eme ka nwanyị nọ n'ọnọdụ na-enweghị ike ịme ya.
Ụmụ nwanyị mara mma nke nwere ubu mara mma nwere ike were ohere, họrọ uwe na-enweghị atụ na uwe mwụda.
Trapezoidal cut dress, decorated with insets of guipure or lace, ma ọ bụ ikesa nke rhinestones - nhọrọ dị irè maka ememe ọ bụla.
Uwe ejiji maka ndị inyom dị ime
Ogologo ala maka ala taa bu ihe ndi na-adighi nma na-adighi nma na uwe umuaka nke nwanyi. O nwere ike ịdị ka uwe e ji eme mgbede, ma ọ bụ ihe nlereanya maka ụbọchị ọ bụla. Uwe ogologo maka ụmụ nwanyị dị ime maka oge okpomọkụ, nwanyị na nwayọ, ga-enyere aka na-ezochi akụkụ na-abaghị uru nke ọnụ ọgụgụ ahụ ma nwee obi ike . Ndị na-emepụta atụmatụ na-atụ aro ka ị rịba ama ụdị usoro ndị a dị n'ogologo:
uwe ejiji akwa na akuku;
uwe ejiji ọkụ maka ndị inyom dị ime, bụ ndị dị mma maka okpomọkụ;
ụdị, obere n'ihu na ogologo azụ - na akaghị;
na aka aka ala na n'ubu na-emeghe;
na-egbutu uwe aka.
Uwe mara mma nke okpokoro na ala maka ndi di ime
Uwe ejiji n'oge a na-ekpo ọkụ n'ala
Mgbụsị akwụkwọ akpụkpọ ụkwụ
Ịzụ ahịa na Phuket
Jaketị ndị ntorobịa - mepụta ụta dị mma kwa ụbọchị
Ụmụ nwanyị Cashmere obere akpa
Akwa ọhụụ nke afọ ọhụrụ - echiche iri ise nke ememe Afọ Ọhụrụ
Uwe a kpara aka n'ala
Egedege elongated waistcoat - ihe ị ga-eji ejiji nke uwe ejiji ụmụ nwanyị?
Mint ụcha n'ime ime
Ụdị chaa chaa
Ogo na ibu nke Gwyneth Paltrow
Green peas - ọma na ihe ọjọọ
Kedu ihe ga-eri Sphinx?
Eji ọka na-eri nri - ntụziaka kachasị mma maka nri na-atọ ụtọ maka ezinụlọ dum
Simoron - mmezu nke ọchịchọ
Nzube maka nwata ka o kwuo
Ụdị ntutu isi
Ịchọ mma nke tebụl Afọ Ọhụrụ
Ejiji ụlọ na plastik
Cecum - mbufụt, ihe mgbaàmà
Nnukwu cholecystitis - kpatara na ịgwọ ọgwụ, nri, usoro ịwa ahụ
Emancipation na feminism - gini bu ihe di iche na ihe ndi mmadu na-enye?
Vake Belyash - uzommeputa
Lemonade si lemon n'ime ụlọ
Katidral Anglican nke St. Andrew
Nzube sitere na hernia
Ịhịa aka Thai maka ụmụ nwanyị
Nsogbu nke afọ atọ n'ime nwatakịrị
Ntụziaka nke Chapati